Tips Top Kuba Ukuhamba With Izilwanyana zakho | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Tips Top Kuba Ukuhamba With Izilwanyana zakho
Ixesha lokuFunda: 5 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 28/03/2021)
Ezi Tips Top zohambo kunye izilwanyana zakho kufuneka unciphise ukukhathazeka. Ngenxa nantsi eyona nyaniso, abahamba izilwanyana yakho uxinzelelo! Kodwa yintoni nzima kakhulu, yingcinga yokushiya i- izilwanyana ekhaya okanye kwinkathalo yabanye. Ngokucacileyo, akukho mntu ubakhathaleleyo ngale ndlela wenza ngayo wena! Kunene?
Kukho iinketho ezininzi ntoni ukwenza xa uhambela kude nekhaya. iihotele Dog, ukuqesha umgcini, okanye ukuhambisa umthwalo, nakuba lowo cute, ukuba umhlobo wakho aphakathi ukhetho. Ezi ke ixhaphake kakhulu ukuba abantu bakhetha. kunjalo, ngamanye amaxesha ayikho enye indlela kwaye kufuneka ahambe qabane lakho. Nangona kunokuba kakhulu indlela enzima, Gcina A Uloliwe kwezinye iingcebiso top eya kukunceda xa uhamba izilwanyana!
Pet Tips 1: Zisa A Phatha!
Ukuhamba kwindawo iinkonkxa ezintsha yaye mhlawumbi kuya kuba nzima ukuba isilwanyana sakho. ngokwenza Ngoko qiniseka ukuba uhlala enjengoko yakhululeka kangangoko kunokwenzeka ngundoqo nohambo entofontofo wonke obandakanyekayo. Zisa zokudlala zakhe rhoqo, zokulala, kunye nezinye izinto ezinokwenza ukuba inja okanye ikati yakho ikhululeke. Ngaba uzolile yaye akazange enze into embi? Qinisekisa ukuba umvuzo ukuba benze abahamba izilwanyana bekhululekile ngakumbi kwixesha elizayo.
Pet Tips 2: kodwa Not too Ngayo abaninzi…
Ndivakalelwa ngathi oku Kucacile, kodwa mna ndiza ukupela phandle kuwe kunjalo! Musa ubanike isidlo enzima okanye uvumele ukuba basele amanzi kakhulu kangangokuba qabane lakho akuyi kuba umnqweno kokubambela ngokwayo indawo nzima! (Saye alumkise ukuhamba izilwanyana zakho kungaba olukhohlisayo!)
Pet Tips 3: Lolonga
Enoba uthanda okanye hayi, ezi Ngcebiso ziPhezulu zokuhamba nezilwanyana zasekhaya zithetha ukuba kuya kufuneka wenze uhlobo oluthile lokuzilolonga! Kanye ngaphambi kokuba uqale uhambo, uhambe nabo abathile umthambo! Ngenxa yokuhamba extra-elide okanye lokudlala olunzulu kunye nomhlobo wakho anoboya intanda, yena okanye yena ukuze abe udinwe kakhulu ukuba ukhathazeke ngezinto. ukuba namkela ikati ukuba akunjalo uwuthandayo yokunyuselwa ukuba ngokubaleka, ukuzama ukuvuselela kubo ngaphakathi. Yenza iishiyi zokutshintsha zinokuza ngohlobo lothuli umzekelo! Ndithembe… I namava xa ehamba izilwanyana!
EBerlin ku Potsdam Uqeqesha
Pet Tips 4: Research Embassy Requirements
amazwe ezahlukeneyo zineemfuno ezahlukeneyo. Amazwe amaninzi afuna ixesha yedwa, ngoko ukuba ufuna ukuchitha ixesha ehamba kunye nezilwanyana zasekhaya, qiniseka ukuba kabini-hlola le! amazwe amaninzi afuna ipali ukuba sinomgada,, bordetella (yenja ukhohlokhohlo), kunye parvo. Biza Embassy kunye ukwenza uphando yakho intanethi ukuze sibone oko neemfuneko lizwe zezi, kwaye uqinisekise ukuba amaphepha akho ziluncedo xa ewela umda.
Ungaphanda ngokuhamba nezilwanyana zasekhaya kunye neemfuno zelizwe apha PetTravel.com.
5. Fumana Certificate Health A
leziqinisekiso zempilo kudingwa Airlines, nabasemagunyeni, iihotele, Amaziko lesilwanyana-care, kunye nabanye xa uhamba kunye nezilwanyana zasekhaya. Kwiimeko ezininzi, xa uhamba kunye izilwanyana kufuneka ufumane isiqinisekiso sempilo yakho phakathi 10 imihla kokuqala uhambo lwakho. Ukuphanda iimfuneko ezithile uhambo lwakho ngaphambi kokuya wempahla, ukuze ziquka yonke into eyimfuneko kwisiqinisekiso.
6. Gcina Ikopi yekhompyutha Certificate Impilo Pet zezenu
iihotele abaninzi, ezohambo, ukufuya amaziko ononophelo, Airlines, kunye namasiko kunye arhente ongenelelo zifuna irekhodi eshicilelweyo isiqinisekiso sakho izilwanyana-qabane. Kunokuba ukushicilela off inqwaba iikopi wonke umzekelo kunokwenzeka, uprinte off isibini uze ugcine ikopi yekhompyutha xa uhamba kunye izilwanyana.
Myscha Theriault is a best-selling author and internationally-syndicated travel columnist who travels full-time with her science journalist husband and giant Labrador retriever. Ikopi yakhe electronic lokuposa, yena kusoloko ekulungele ukuba baveze iziqinisekiso zempilo inja yakhe njengoko kuyimfuneko.
“Umshicileli iziko loshishino I hotele uyasivumela ukuba uprinte ikopi PDF lweerekhodi shot Labrador lethu njengoko kuyimfuneko, umzekelo xa kufuneka babhukishe zenjikalanga olondolozo lwasemini yakhe kwindlela. Kugcina clutter iphepha phantsi imihla ngemihla, ngoxa ezinikele lilungiselelwa-ngomzuzu wokugqibela utshintsho kucwangciso lwethu.”
Reggio Emilia ku Florence Uqeqesha
7. Research Local bezilwanyana
Nje xa kukho into eyenzekayo endleleni, ongafuni ukuba aza- ukufumana wempahla owaziwayo. Bhala iinkcukacha zoqhagamshelwano ngenxa koogqirha bezilwanyana ezimbalwa kuloo mmandla Sityelele phambi kokuba uqale abahamba izilwanyana.
Sinethemba ezi Tips Top zohambo kunye izilwanyana zakho ehlile luvo lwakho a bit! Masazi ukuba unayo nayiphi na eminye tips phezulu ukwabelana Gcina A Isitimela kunye noluntu lwethu. Singathanda ukuva kuwe!
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “Tips Top Kuba Ukuhamba With Izilwanyana zakho” kwi sayithi yakho? ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye okubhaliweyo kwaye sinike nje ngetyala ngekhonkco kule post blog. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-traveling-with-your-pets%2F%3Flang%3Dxh- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
#animallover #izilwanyana #iikati #dogs #pets #pettips #travelingpets #travelwithpets europetravel trainjourney